महिला विकास अधिकृतद्वारा आफैलाई अपाङ्गता परिचयपत्र ! – इन्सेक
महिला विकास अधिकृतद्वारा आफैलाई अपाङ्गता परिचयपत्र !
दैलेख ०७३ मङ्सिर ४ गते
महिला विकास अधिकृत विश्वमणी जोशीले आफैलाई अपाङ्गता परिचयपत्र बनाएकी छन् । कात्तिक ३० गते जारी गरिएको ३७४८ नम्वरको 'ग' वर्गको परिचयपत्रमा दुवै आँखाको दृष्टि कमजोर भनी परिचयपत्र बनाएको पाइएको हो । उनी उमेरले ५४ वर्षीया भइन् ।
तपार्इँले आफैलाई परिचयपत्र जारी गर्न मिल्छ भनी इन्सेक प्रतिनिधिको प्रश्नमा उनले भनिन्-'मेरो आँखा कमजोर भएकोले परिचयपत्र बनाएकी हुँ । दृष्टि कमजोर भएपछि परिचयपत्र लिन मिल्छ ।'
यसै विषयमा महिला विकास विभागका महानिर्देशक नरेशकुमार चापागाईँसँग जिज्ञासा राख्दा उनले भने-'उहाँले आफूलाई अपाङ्ग परिचयपत्र जारी गर्न मिल्दैन । त्यो नैतिकता पनि होइन ।'
गाविसको सिफारिस, अपाङ्गता देखिएको वा पाइएको भन्ने जिल्ला अस्पतालको सिफारिस, अनुसूची आवेदन फारामसमेत बुझाएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको जिल्ला अपाङ्गता समन्वय समितिको वैठकको निर्णयबाट मात्र परिचयपत्र जारी गर्न सकिनेमा यो प्रक्रिया नपुर्‍याई महिला विकास अधिकृत जोशीले आफ्नो परिचयपत्र आफै जारी गरेको खुलेको हो ।